SOBA: Fakkiin kun WBOn (Shaneen) karaa gara Finfinnee irra jiraachuu isaa hin agarsiisu | Addis Zeybe - Digital Newspaper
SOBA: Fakkiin kun WBOn (Shaneen) karaa gara Finfinnee irra jiraachuu isaa hin agarsiisu
Fuulli Fesbuukiin hordoftoota 184,000 ol qabu tokkoo “Erga Jaal Marroon akka Finfinnee too'ataniif waraana bilisummaa Oromootiif ajaja dabarsanii booda waraanni bilisummaa Oromoo gara Finfinnetti Ooraaliin imala eegalee jira. ” jachuun Fakkiidha wal-qabsiisuun Afaan oromootiin maxxansee ture. Maxxansiin kuniis hanga baruun kun bahuutti ri’akshinii 2000 ol kan argate yoo ta’u yeroo 140 ol qoodameera.
Gaafa guyyaa Hagayya 1, 2014, ALI Hogganaan WBO Kumsaa Dirribaa (Jaal Maroo) Associate Pressiif ABUT waliin michoomuu isaani himee ture. Gaafa Onkolooleessa 1, 2014 ALI gaazexesituun BBC Afrikaa Katerine Byaruhanga gabaasa vidiyoo mata-dureen isaa "Ethiopia's secretive armed group" jadhu leenjii gurmii kanaa gaafiif deebi waliin hojjatee turte. Jaal maroonis kiba, lixa fi Oromiyaa jedduu too’achuu isaanii BBCfi himeera.
Haata’u malee suuraan duraa kun yeroo jalqabaaf kan maxxanfame gaafa guyyaa Adoolessa 13,2021 ALF toora-intarneeta genevasolutions.news jadhamu irratti. Maxxansichiis UN Wattaddarri Ertiraan akka naannoo Tigraay keessaa bahu kan hubachiisu.
Faakiin fuulli fesbuukiin kun suraa kana fotoshoopiin tottolchuun akka looltooni Shaneen (WBOn) too’ate fakkesse.
Kanaafuu Postiin kun WBO (shaneen) karaa finfinnee irratti jiraachuu isaa waan hin ibsineef HaqCheck SOBA Jadhee ramadeera.